Isihlahla se-Aloe, esingafinyelela emamitha ayishumi emazweni ashisayo, ngaphansi kwezimo zezindlu zethu seziphenduke imbali yasekhaya, eyaziwa empilweni yansuku zonke njengeminyaka eyikhulu ubudala. Amaqabunga ayo asetshenziselwa ukulungiselela amafomu okwelapha: ijusi, amafutha, amaphilisi, njll. I-extract ethandwa kakhulu yi-aloe tree. Isenzo saso sisekelwe ekutheni isitshalo sikhiqiza izinto ezikhethekile ezibizwa ngokuthi i-academician Filatov's stimulants. Zakhiwa emaqabunga e-aloe, uma zifakwa ngaphansi kwezimo ezingavumelekile zalesi sitshalo. Ngokujwayelekile ngale njongo indawo emnyama enezinga lokushisa cishe lika-3 degrees Celsius. Ekhaya, kungaba yifriji evamile yasendlini. Inqubo yalolu lungiselelo lwezinto ezibonakalayo kuthiwa yi-biostimulation.
Ngemva kokusika amaqabunga e-aloe, agcinwa ezimweni ezinjalo izinsuku ezingu-25. Ngenxa yokufakwa kwezinqubo zokuzivumelanisa, izishukumisi ze-biogenic zakhiwe kuzo - izinto ezingathuthukisa izinqubo zokusebenzisa umzimba kanye nokuphulukiswa kwezicubu. I-aqueous extract extract is used for oral and injections. Ilungiswe imboni yezokwelapha. Indlela yokukhululwa - encane, ngamabhodlela angama-100 ml, okwakungenwa ngaphakathi nangamapuloule ku-1 ml yezijovo.
Ngokuvamile, uketshezi oluthile lwe-aloe lunqunywe ngendlela yamajojo. Izinkomba zokusetshenziswa yizifo ezidinga ukusheshiswa kokuvuselelwa kwezicubu, ukuvuselelwa kwezinhlamvu, nokuthuthukiswa kwezidakamizwa zamathambo. Lokhu kungaba izifo zeso, njenge-keratitis, i-blepharitis, i-myopia eqhubekayo, i-conjunctivitis, i-myopic chorioretinitis, i- vitreous opacity , nabanye. Ukuphumelela i-aloe ekhishwe ngesisu esiswini, isifo sokuphefumula, isifo se-pneumonia esigabeni sokubhuka, i-ulcer ye-duodenum.
Imfundo enqunyiwe, nsuku zonke 1 ml ngaphansi kwesikhumba (izingane zibekwe ezinyangeni ngokweminyaka). Ubude benkambo bangaba kusuka ezinsukwini ezingu-20 kuya kwezingu-50. Ukuthatha okukhipha ngaphakathi kuboniswa ngezifo ezifanayo. Uphuzile epasipuni kathathu ngosuku. Inkambo yokwelashwa yizinsuku ezingu-30-45. Ngonyaka ungachitha izifundo ezintathu.
Ukuqhathaniswa kokukhipha kuyisifo esibucayi nesisu, ukukhulelwa, isifo senhliziyo esibi, isifo sofuba, isifo esinzima sezinso.
Ngaphandle kokukhishwa, emithi yomuthi, ijusi le-aloe lisetshenziswa kakhulu futhi lisetshenziswe ngaphakathi . Awekho ukuphikisana kokusetshenziswa kwangaphandle kwayo. Lisetshenziswa ekwelapheni amagundane ahlanzekile, izilonda ze-trophic nokushisa, ukuhlanza umlomo, ukufaka emakhaleni. Kunomthelela omuhle ekwelapheni kwe-radiation dermatitis, isetshenziselwa ekwelapheni izifo ze-gynecological.
Izakhiwo zokwelashwa zalesi sici zihlotshaniswa nokuba khona kwe-anthraglikosides, amafutha abalulekile, amavithamini nama-enzyme. Uma i-aloe yayisetshenzisiwe ngaphambi kokulungisa ijusi, ijusi inezinto ezithinta i-biogenic stimulant, njenge-alove ephuma ekukhiqizeni izimboni. Imbonini yezokwelapha ikhiqiza ijusi kulesi sitshalo, yenezela kancane kancane utshwala kuyo. It isetshenziselwa gastritis kanye colitis ezingelapheki.
Ngaphakathi, i-aloe ngesimo sejuji esisha sithathwa nge- gastritis engapheliyo, ngokuqotshwa, ukungondleki, kanye nokuqiniswa okuvamile nokuthuthukisa ukumelana komzimba.
Ukuqhathaniswa okusetshenziswa ngaphakathi kungukudla kwesisu nesifo se-hemorrhoidal. Lokhu kungenxa yokuthi ama-antraglikozids afakwe ejusi abangela ukuqhuma kwegazi ezingxenyeni zomzimba futhi angabangela ukuphuma kwegazi. Uma uthatha ijusi le-aloe ngomthamo omkhulu noma usebenzisa isikhathi eside, i-peristalsis ingasuswa, futhi ukuvuvukala kwamathumbu kuyaqala.
Amalungiselelo e-Aloe vera okwamanje amisiwe kaningi. I-biostimulator etholakale kuyo yanikeza isiqondiso esisha esisha sokusebenza kwayo. Yisebenzise impilo!
I-hypotension: ukwelashwa ngamakhambi abantu. Decoction of amakhambi ngaphansi kwengcindezi enciphise. Ukupheka kwabantu
Ibhroshi Original ezenziwe ngendwangu ngezandla
Article 186 of Criminal Code of the Russian Federation ngamazwana
Biography futhi isebenza Taira Salahova
The best ngubhuki Asian: ohlwini, ukukala, incazelo kanye nokubuyekeza
Izimpawu, izimbangela kanye nokwelapha umkhuhlane ekhaya
Ukuzalwa KukaKristu iNcasakazi eCwebileyo: izimpawu, amasiko, imikhosi egujwayo
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo «Tako Jumper X». ezinye izici
Ihhotela Ellaidhoo Maldives ngu Cinnamon 4 * (Ellaidu, Maldives): ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
Indlela ukukhetha hood ngoba ekhishini: amathiphu